“ တရုတ်မှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာလို့ လူ ၆၁ ထက်မနည်းသေခဲ့ပြီး😱😱 လူပေါင်း သုံးသိန်းကျော် နေရာပြောင်းခဲ့ရ”😱😱
14/06/2019 Thu Yay 0
“ တရုတ်မှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာလို့ လူ ၆၁ ထက်မနည်းသေခဲ့ပြီး😱😱 လူပေါင်း သုံးသိန်းကျော် နေရာပြောင်းခဲ့ရ”😱😱 တရုတ်နိုင်ငံတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းကာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် ၆၁ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး…. လူပေါင်း ၃၅၀၀၀၀ ခန့်ကို ဘေးကင်းရာသို့ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရ…. တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းဒေသများတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းကာ ရေကြီးရေလျှံဖြစ်ပွားမှုကြောင့်…. ၆၁ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး လူပေါင်း ၃၅၀၀၀၀ ခန့်ကို Continuous reading
စီရော်နယ်ဒိုရဲ့ဆန္ဒအရ ဂျူဗင်တပ် ခေါ်ယူပေးမယ့် ရီးရဲကစားသမား (၃) ယောက် ။
စီရော်နယ်ဒိုရဲ့ဆန္ဒအရ ဂျူဗင်တပ် ခေါ်ယူပေးမယ့် ရီးရဲကစားသမား (၃) ယောက် ။ ပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင် ကြယ်ပွင့် စီရော်နယ်ဒိုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီက ရီးရဲကနေ ဂျူဗင်တပ် အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်ဒိုဟာ ရီးရဲမှာ (၉) နှစ်ကြာ ကစားလာခဲ့သူဖြစ်လို့ ရီးရဲကစားသမား တော်တော်များများနဲ့ အလွန်သံယောဇဉ် ဖြစ်နေသူပါ။ စီရော်နယ်ဒိုဟာ Continuous reading
ကောင်လေးချောချောလေးတွေကို ကြည့်ခြင်းက အမျိုးသမီးတွေကို မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေ
ကောင်လေးချောချောလေးတွေကို ကြည့်ခြင်းက အမျိုးသမီးတွေကို မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေ KBS ရုပ်သံလှိုင်းရဲ့ Discoveries in Life ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကနေ သူတို့ရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုကို ထုတ်ဖေါ်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်….. အဒါကတော ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ အမျိုးသားတွေကို ကြည့်ခြင်းက ကျောင်းမှာ အမှတ်ကောင်းကောင်းရစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကိုတော့ သက်လတ်ပိုင်း အမျိုးသမီးတွေနဲ့ စမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Continuous reading
တရုတ်ယောကျာ်းကို မယူရင် အတူအိပ်ပေးရမည်၊ ငြင်းဆန်လျှင် ဓားဖြင့် ခုတ်သတ်ခံရမည်ဟူသော ခြိမ်းခြောက်မှုများဖြင့် ရောင်းစားခံလိုက်ရသော သားအမိ ၃ဦးကို ပြန်လည်ကယ်ဆယ်နိုင်ပြီ
တရုတ်ယောကျာ်းကို မယူရင် အတူအိပ်ပေးရမည်၊ ငြင်းဆန်လျှင် ဓားဖြင့် ခုတ်သတ်ခံရမည်ဟူသော ခြိမ်းခြောက်မှုများဖြင့် ရောင်းစားခံလိုက်ရသော သားအမိ ၃ဦးကို ပြန်လည်ကယ်ဆယ်နိုင်ပြီ မူဆယ်၊ ဇွန် ၁၄ (သတင်းတမန်) တရုတ်ယောကျာ်းကို မယူပါက အတူတူအိပ်ပေးရမည်၊ ယင်းအပေါ် ငြင်းဆန်လျှင် ဓားဖြင့် ခုတ်သတ်ခံရမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခံရပြီး….. တရုတ်ယောကျာ်းထံရောင်းစားခံလိုက်ရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား Continuous reading
“မြန်မာပြည်မှာ လူတချို့ စိတ်ဓါတ်တွေပြင်ဖို့ အချိန်အတော်ယူရမယ်”
“မြန်မာပြည်မှာ လူတချို့ စိတ်ဓါတ်တွေပြင်ဖို့ အချိန်အတော်ယူရမယ်” မန်းလေးမှာ ကိုဝမ်းလုပ်နေတဲ့ မန္တလေးကျုံးဘေးက Food Box တွေမှာတော့ မုန့်တွေ၊ အချိုရည်ဗူးတွေ အလကားယူသွားလို့ရသလို စာအုပ်တွေလည်း အခမဲ့ဌားဖတ်လို့ရပါတယ်တဲ့… သိပ်ကောင်းတဲ့ ရည်ရွှယ်ချက် ဒီသတင်းစတက်လာကတည်းက လိုက်ဖတ်မိတယ်။ အမှန်တော့ ပြည်ပမှာဆိုရင် အိမ်ခြေရာမဲ့တွေအတွက် စားစရာလှူတယ်ပေါ့ဗျ… မြန်မာပြည်မှာတော့ ကလေးတွေစာဖတ်လာအောင် Continuous reading
ထူးထူးခြားခြား အမျိုးသားများသာ တင်ရတဲ့ ကသာမြို့က နတ်တင် ပွဲ
ထူးထူးခြားခြား အမျိုးသားများသာ တင်ရတဲ့ ကသာမြို့က နတ်တင် ပွဲ ကသာ၊ဇွန်-၁၄ ကသာမြို့နယ် တုန်းပေါ ရွာနှင့် သိမ်အင်းရွာတွင် အမျိုးသားများသာ တင်ရတဲ့ နတ်တင်ပွဲကို ဒီနေ့ နံနက်ပိုင်းမှာ အစဉ်အလာ မပျက် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်… နတ်တင်ပွဲကို မိုးထဲလေထဲမှာတောင် ရိုးရာမပျက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ဒီပွဲမှာ အမျိုးသမီးတွေ လာလို့ Continuous reading
“ဓါးခုတ်မှုများ မကြာခဏဖြစ်ပွားနေတတ်သည့် လားရှိုးမြို့တွင် (၃)ရက်အတွင်း (၈)ဦးဖမ်းမိ”
“ဓါးခုတ်မှုများ မကြာခဏဖြစ်ပွားနေတတ်သည့် လားရှိုးမြို့တွင် (၃)ရက်အတွင်း (၈)ဦးဖမ်းမိ” မေလကုန် နှင့် ဇွန်လပထမပတ် အတွင်း ဓါးခုတ်မှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေတတ်သည့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့တွင် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ ပါဝင်သည့် ခရိုင်/ မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီက ဦးဆောင်ကာ ညပိုင်း လှည့်ကင်းများဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ Continuous reading
မလေးရှားနိုင်ငံသားပါဝင်တဲ့ အင်တာနက်ငါးဂိမ်းလောင်းကစားဒိုင်တစ်ခု မန္တလေးတွင်ဖမ်းမိ
မလေးရှားနိုင်ငံသားပါဝင်တဲ့ အင်တာနက်ငါးဂိမ်းလောင်းကစားဒိုင်တစ်ခု မန္တလေးတွင်ဖမ်းမိ မန္တလေး ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်အတွင်းက အင်တာနက်ငါးဂိမ်းလောင်းကစားဒိုင်တစ်ခုကို မန္တလေးရဲတပ်ဖွဲ့က ဇွန်လ(၁၃)ရက်နေ့ကပဲဝင်ရောက်ဖမ်းဆီး လိုက်ပါတယ်…… ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ၃၂ လမ်းနဲ့ ၇၄ လမ်းထောင့်ကနေအိမ်တစ်ခုမှာ အင်တာနက်ငါးဂိမ်းလောင်းကစားဒိုင် ဖွင့်လှစ်ထားတယ်ဆိုတဲ့….. “သတင်းအရ ညနေ ၅ နာရီ ၄၅မိနစ်ခန့်မှာပဲ ပူးပေါင်းအဖွဲ့က သက်သေတွေနဲ့အတူ ရှောင်တခင်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးလိုက်တာလို့သိရပြီ;…. အဲဒီမြို့နယ်အပိုင်ရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူတွေဟာ Continuous reading
ကိုယ့်ချစ်သူ ကောင်မလေးကို ပြုမှု ဆက်ဆံ သင့်တဲ့ အချက် များ
14/06/2019 Yan Naing 0
ကိုယ့်ချစ်သူ ကောင်မလေးကို ပြုမှု ဆက်ဆံ သင့်တဲ့ အချက် များ လူတိုင်း ကတော့ သာယာတဲ့ အချစ်ရေး ကို လိုချင် ကြတာ ပဲလေ…. အဲ့လို အချစ်ရေး သာယာဖို့ အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် စလုံး က လိုအပ် ပါတယ် ။ Continuous reading